17th January 2022, 09:17 pm | ३ माघ २०७८
आरोप लगाइदिए पुग्यो - पत्याउने छँदैछन्। पुष्टि कसैले गर्नपर्दैन, जिम्मेवारी लिनु परको कुरा। त्यस्तै चलिरहेको छ पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका पूर्व र वर्तमान दुई 'मन्त्री'बीच।
योगेश भट्टराईलाई केपी ‌ओलीले नै दिएको नाम - बैगुनी केटो। तिनै ओलीको कृपामा मन्त्री बनेका प्रेम आले। ओलीको शासनमा आले बदनाम थिए, बैगुनी केटो 'इमान्दार'। तर यतिखेर आले र भट्टराई राजनीतिक नदीका दुई किनारतिर छन्। विपक्षीको लाइनमा भट्टराई छन् भने सत्तामा आले।
त्यही मौकामा योगेशले आलेविरुद्ध अभिव्यक्ति के दिएका थिए - गुलेलीको जवाफ तोपले फर्काइरहेका छन् आलेले।
'फोहर गरेर गएका छन्, कसैले त सफा गर्नैपर्‍यो नि!' भन्दै आलेले योगेशविरुद्ध लगातार बमबारी गरिरहेका छन्। त्यो तोपमा बतास समूह, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मी हुँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हराएको सुन र बतासलाई नै सुम्पेको होटेलसम्म तानिँदै छ। हेरौँ - यो हिलो छ्यापाछ्याप कहाँसम्म पुग्छ।
आले र बैगुनी केटो बीचको यो मारामुग्रीको एउटा फाइदा भने छ - जनताले नेताहरु कति भ्रष्ट छन्, भटाभट खुलिरहेको छ। आउने मन्त्रीहरुले फेरि आलेको फाइल खोतल्लान् भन्ने आशा बढेको छ। त्यसपछिकाले पनि गर्लान्। सबैले आलेकै पारा देखाए भने त मैमत्त भएका नेता डराउलान कि जनतासँग? सुध्रिएलान कि थोरै! आशाकै विषय होइन त यो?